Dhegeyso:Fadhigii Barlamaanka Puntland oo maanta dib u furmay – Radio Daljir
Luulyo 22, 2015 6:57 b 0
Arbaco, Luuliyo 22, 2015 (Daljir) —Kalfadhiga 35-aad ee golaha wakiilada Puntland ayaa maanta dib u furay kadib dib u dhac ku yimid maalinbimadi shalay oo qorshuhu ahaa inu furmo.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Siciid Xassan Shire ayaa maanta dib u furay fadhiga Baarlamaanka waxaana uu tilmaamay gudoomiyuhu in shalay fadhigu u baaqday xildhibaanada oo soo wada xaadiri waayey.
Dhinaca kale Gudoomiyaha ayaa sheegay in kalfadhiga goluhu gaba-gabo yahay islamakana ay harsan yihiin qodobo mihiim ah oo kala ah, xisaab xirka, meel-marinta Wasiirradda cusub, dib u eegista Dasuurta Puntland, meel-marinta heshiisyada Xukuumaddu gashay iyo ansixinta xeerarka Xukuumadda.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Ajandaha golaha ee labada maal-mood ee soo socda uu yahay ansixinta Wasiirradda cusub ee dhowaan kusoo biiray Xukuumadda Madaxwaeyne Gaas iyo xisaab xirka sanadka.
Dhegeyso codka Gudoomiyaha Barlamaanka.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Caawa iyo Daljir _Khamis_24